महाधिवेशन कहिले सम्म सार्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फरक फरक प्रस्ताव - worldwidetvnepal
World Wide TV Nepal
वि.सं.२०७८ माघ ११ मंगलवार
महाधिवेशन कहिले सम्म सार्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फरक फरक प्रस्ताव
वि.सं.२०७८ साउन २८ बिहीवार ०३:३१
नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सार्ने सहमति भएको छ । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित महाधिवेशन सार्ने सहमति गरेको हो ।
महाधिवेशन कहिले सम्म सार्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फरक फरक प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । देउवा पक्षबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आगामी मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असोजमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी भदौभित्र वडा अधिवेशन सुरु गर्ने नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
नेता मिनेन्द्र रिजालले नयाँ कार्यतालिका ल्याउने सहमति भए पनि वडा अधिवेशन कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्नेबारे समझदारी नभएको बताए । उनले ” भदौ १६ मा महाधिवेशन हुने कुरा त भएन । तर, अब वडा अधिवेशन कहिले सुरु गर्ने भन्नेमा विषयमा सहमति भएको छैन । यसमा फरक मत छ ।”
यस विषयमा समझदारी जुटाउन केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि शीर्ष नेताबीच छलफल हुने रिजालले बताए । विहीबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गर्ने पूर्वनिर्धारित एजेण्डा छ ।
पौडेलले भने, “दशैं अगाडि महाधिवेशन सक्नैपर्छ । विधानलाई हेला गर्न पाइँदैन । संविधानलाई उपेक्षा गर्ने पाइँदैन ।” क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याएर मात्र सोहीअनुसार नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पौडेलले बताए । उनले भने, “कार्यतालिका मात्र ल्याएर क्रियाशील सदस्यता टुंगिएन भने त्यो कार्यतालिकाले पनि पहिलेकै जस्तो हावा खान्छ । पहिलेको कार्यतालिकाले जसरी हावा खाएर कार्यान्वयन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यता​ नटुंग्याई कार्यतालिका ल्याइए यो पनि त्यही अवस्थामा पुग्छ । क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएपछि मात्र कार्यतालिको अर्थ हुन्छ ।”
तर, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने विहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका पेस हुने बताए । उनले भने, भोलि कार्यतालिका र निर्देशिका पेस हुन्छ । निर्देशिकाको काम गर्ने साथीहरु लागिराख्नुभएको छ ।
९९ प्रतिशत क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगिएकाले महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउने खड्काको दाबी छ । उनले भने, “कार्यतालिकाबारे आज छलफल भए पनि भोलि बैठक अगाडि छलफल गरेर कार्यतालिका पेश हुन्छ ।”
खड्काका अनुसार निर्वाचन समितिले मागेको समय अनुसार कार्यतालिका हेरफेर हुन्छ । निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशन देखि महाधिवेशन गर्ने मागेको समयलाई आधार बनाएर महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका मैले पेश गर्छु,ु खड्काले भने ।
निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले क्रियाशील सदस्यको सूची प्राप्त गरेको ५६ दिनमा वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशन गर्न सकिने रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ुहामीले ५६ दिनको समय मागेका छौं । निर्वाचन समितिको धेरै काम हुन्छ । ५६ दिन त चाहिन्छ नै । किनभने वडामा क्रियाशील सदस्यताको सूची पाएको २० दिनपछि मात्र वडा अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।ु
उनका अनुसार केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि निर्देशिका छापेर देशभर वितरण गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउँदा जनसंख्याका हिसाबले प्रतिनिधित्व हुने भनिए पनि त्यसको डाटा तयार हुन सकेको छैन । त्यसका लागि पार्टी विधानका केही बुँदामाथि बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय लिनुपर्नेछ । त्यसको मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन समितिका अनुसार त्यो काम पनि हुन सकेको छैन । निर्वाचन समितिले विभिन्न प्रमाणपत्र र डकुमेन्टको व्यवस्थापन गरी छाप्ने काम हुन बाँकी छ ।
अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम पनि हुन सकेको छैन । ७७ जिल्लाबाट प्रत्येक वडाका लागि मतदान अधिकृत तोक्ने काम बाँकी छ । आफूहरुले उक्त काम गर्न २० दिन समय चाहिने यादवले बताए । काँग्रेसको महाधिवेशनको तयारी र सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुका विषयमा छलफल गर्न विहीबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ ।
News Views: 335
रामचन्द्र पौडेलको सहमतिबेगर देउवा पक्षले महाधिवेशन नसार्ने
केपी ओलीलाई भेटेर माधवकुमार नेपालसँग मिल्न अनुरोध गर्दै विष्णु रिजालले १४ बुँदे स्मरण पत्र बुझाए
“सातौं राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड – २०७८ को नोमिनेशन (top 5) घोषणा तथा प्रमाण पत्र बितरण कार्यक्रम” यहि माघ ४ गते हुने
वि.सं.२०७८ माघ २ आइतवार १३:३७
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, उपत्यका समन्वय समिती,...
ओमिक्रोन भेरियन्टका कारणले सङक्रमित हुने धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने
वि.सं.२०७८ पुस ३० शुक्रवार ०९:०९
अहिले देखिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने...
लोक बिधा तर्फ सर्वोत्कृष्ट गायकको अवार्ड रामचन्द्र चन्दले चुमे
वि.सं.२०७८ पुस २९ बिहीवार ०८:५८
‘वुमेन्स एरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि’ नेपालको आयोजनामा ‘हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड’...
शंकर बिसिको निर्देशनमा “प्यारो प्यारो नेपाल” गीतको अमेरिकामा छायांकन
वि.सं.२०७८ पुस २९ बिहीवार ०२:५८
पछिल्लो समयमा नेपाली गीत संगीतलाई निकै माया गर्ने तथा अमेरिकामा...
कामना ओलिको “रोल्पा जलजला” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
वि.सं.२०७८ पुस २८ बुधवार ०४:०५
पछिल्लो समयमा टिकटक धेरैले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । टिकटकले...
“हाम्रो बसेरी राम्रो बसेरी” गीतको बिमोचनको अवसरमा मृगौला पिडितलाई ६८ हजार ५ सय ५१ रुपैया हस्तान्तरण
वि.सं.२०७८ पुस २५ आइतवार ०६:३८
बसेरी उदयपुर सोसियल ग्रुप तथा व्यवस्थापन टिमले निर्माण गरेको गीत...
“आठौं संस्थागत मञ्जु दुर्गा स्मृति समन्वय फुटसल कप – २०७८” भब्यताका साथ सम्पन्न
गिनिज अफ वल्ड रेकर्डस् होल्डर बन्दना नेपालको अभिनयमा “खवर पाए” (भिडियो सहित)
प्रेम गुरुङको शब्दमा राजु लामा र तारा श्रीसको आवाजमा “ओ ङोल्स्यो खोबाले” रेकर्डिङ्ग सम्पन्न
World wide tv nepal.com
दर्ता न: 202489/075/76
वलर्ड वाईड मल्टि मिडिया सेन्टर प्रा. लि.
दर्ता न: १२६१/०७५-७६
अध्यक्ष / कार्यकारी सम्पादक:
प्रकाश बराईली "अभिव्यक्ति"
राज कुमार रायमाझी
अधिवक्ता त्रिलाेक चन्द विश्वास वि.क.
अधिवक्ता पशुपति बराईली
फाेन : ९८५११९५२९०
Copyright © 2011-2022 www.worldwidetvnepal.com | All Right Reserved
Developed By: MultiTechNepal